Fursadaha Tabarucaadka Akhriska | Tonka Adeegaa
Buugaagta loogu talagalay Afrika
Magac fudud oo loogu talagalay urur leh hawl fudud. Waxaan ururinaa, kala soocnaa, rarnaa, oo u qaybinnaa buugaag ardayda da 'kasta leh ee Afrika. Hadafkeenu: in la soo afjaro buuga gaajada ee Afrika.
Bulshooyinka Bond ee Wadaagga ah
Ka dib tababarayaashu waxay u baahdeen Barnaamijkii Saaxiibtinimada Daraasadda iyo hoos u dhaca Xarumaha Shaqada Guriga ee Bulshooyinka Bond ee Guud.
Carruurta ka soo jeeda qoysaska dakhligoodu hooseeyo badanaa waxay la kulmaan caqabado dheeraad ah xagga waxbarashada iyo inay ku fiicnaadaan dugsiga. IOCP waxay bixisaa Naadiyada Shaqada Guriga inta lagu jiro sanad-dugsiyeedka toddobo xaafadood oo dabaqyo ah oo ku yaal Plymouth. Naadiga Shaqada Gurigu wuxuu isku xiraa dhallinyaradan iyo tababarayaal mutadawiciin ah.
Golaha Akhriska iyo Qoraalka ee Minnesota
Barnaamijyada akhris-qorista waxay bixiyaan fursado mutadawiciin badan oo abaalmarin ah. Fursado dheeri ah ayaa la heli karaa iyadoo kuxiran baahida barnaamijyada.
PPL fursado badan oo iskaa wax u qabso ah ayaa kuu ogolaanaya inaad la wadaagto awoodaada iyo khibradaada si aad u xoojiso bulshadeena. Mashaariicda hal maalin ah ama kaqeybgalka joogtada ah ee nolosha dhalinyarada iyo dadka waaweyn, tabaruceyaasha PPL waxay dadka ka caawiyaan inay naftooda caawiyaan.
Gaadho oo Akhriso MN
Gaarsiinta iyo Akhrisku waxay siisaa carruurta yaryar aasaas u ah guusha iyaga oo buugaagta ku daraya daryeelka carruurta iyo ku dhiirrigelinta qoysaska inay si wada jir ah wax u akhriyaan. Caawintaada, waxaan si togan ugu saameyn karnaa horumarka caafimaad ee carruurta.
Akhriso Xaqiiqda hadafkeedu waa kobcinta akhris-qorista iyadoo la aruurinayo oo hadiyado la siinayo carruurta khatarta ku jirta.
YMCA - Dugsiga ka dambeeya iskuulka iyo barnaamijka xagaaga ee Minnetonka Heights
Kaalay noqo Caawiyaha Shaqada Guriga Minnetonka Heights ee Minnetonka iskuulka kadib ama iskaa wax u qabso barnaamijkeena xagaaga.
La xiriir joanne.robinson@ymcatwincities.org